UV tifitra mpanamboatra milina sy ny mpamatsy - Godn
1.1 faritra telo ao anatin'izany ny mamahana fizarana tratra, loko hamerina sy manadio fizarana, workpiece mampidina entana avy fizarana. Ny sakafo misy asidra sy ny fehin-kibo alkali harafesiny mahatohitra sy abrasion mahatohitra. Izany ihany koa amin'ny fehin-kibo mandeha ho azy sy ny fahadisoan-dàlana rectifying fitaovana rafitra manohitra ny fahadisoan-dàlana.
2. Belt rafitra fanadiovana
2.1 Paint hitaky sy manadio fizarana mampiasa asidra manohitra alkali mahatohitra, harafesiny mahatohitra PE fehin-kibo. ary napetraka ny loko sy ny fehin-kibo sitrana rafitra fanadiovana dia eo ambany fehin-kibo. 98% ny ny-sprayed loko eo amin'ny fehikibo dia tonga dia hofafako hiala any an-menaka siny ny fikikisana rafitra loko ary miandry reuse.there ireo roa hafa karazana rollers vy sy scrapers ny manapotsitra sy indray tamy ny fehin-kibo. Ataovy azo antoka ny fehin-kibo madio sy ny fandotoana-maimaim-poana amin'ny fidirana. Ary azo ampiasaina indray.
3. fanafody rafitra
3.1 Reciprocators hanangana rafitra fanaraha-maso JAPON. The max. hafainganam-pandeha dia afaka tonga 100m / min. misy 2 reciprocators ny milina tsirairay.
3.2 reciprocator rehetra dia afaka hampitaovana 4 tifitra basy sy ny manan-danja ara-nofo-famatsian paompy.
3.3 Ny scanner makarakara teo amin'ny fidirana dia afaka mandrefy ny sakany ny asa kely mba hahatonga ny tapaka lalan-dra ny basy sy hiverina tamin'ny / eny ny fotoana marina kokoa. Ary tamin'izany andro izany dia mihena ny efitra. Ny makarakara mandany Italia REER marika.
3.4 fikirana ny tifitra dia napetraky ny mpandraharaha eo amin'ny indostria PC.
3,5 alalan'ny fampiasana rafitra fanaraha-maso plc mahatonga azy io ho fitaovana tsotra sy intuitive hahita.
3.6 Ny fanairana jiro eo amin'ny governemanta, raha ny fitaovana no handresy tanteraka na tsiny, dia hanome fanairana.
4. Air tsingerin'ny rafitra
4.1 Double sivana ny Inlet rivotra sy ny tifitra nikatona efitrano manao ny rivotra madio kokoa ao amin'ny efitrano fanafody.
4.2 Ny blower amin'ny hery lehibe soavaly dia nametraka tao amin'ny fivoahana hamehezany ny loko mamofona mikoriana ao amin'ny efitrano sary hosodoko sy hampihenana izany fotoana mitoetra ao an-trano.
4.3 fanoloana ny sivana fitaovana tratra
4.4 UV loko Separator no nametraka teo amin'ny ambadiky ny milina, mba hampisaraka ny UV loko amin'ny loko zavona. Ary afaka ampiasaina indray izany.
Max. tifitra sakany 1300mm
Max. hatevin'ny asa tapa 80mm
amin'ny ankapobeny lafiny 5400 * 6000 * 2500mm
Max. sakafo haingana 8m / min
Air fanerena 0.5-0.8 M pa
Total hery 13kw
Previous: Fluorocarbon Paint fanafody Machine
Next: Rotary fanafody milina
2-Arm Reciprocating tenan'ny Machine
Ary nitsoka tenan'ny Machine
Pu namaoka Machine
UV namaoka Machine
Rotary fanafody milina
Reciprocating fanafody Machine-SPD2500A